Marka iPhone ma noqon on doono, waxaa jira xaalado badan oo aad qaadato waa in tixgelin iyo aad u hesho xal saxda ah si ay u xaliyaan dhibaatada. Halkii plunking boqolaal download doolar iPhone cusub, xulasho wanaagsan waa in la faqri dhowr daqiiqo si aad u hubiso ka soo xal hoose. Kuwani xal waxtar leh waxaa lagu soo ururiyey forums iyo aan waayo-aragnimo u gaar ah, ayaa rajeynaya ay noqon doontaa waxtar aad u sidoo kale.
# 1.Check in iPhone batari ayaa u qulqusho ama ma
Haddii aad iPhone uu si fiican u shaqeeyay iyo dhawr saacadood oo aad ha u isticmaalin oo uusan noqon oo aan ku, ka dibna waxa ay u badan tahay in aad batteriga iPhone oo kaliya hoos u waddaa oo uu ku shaqeeya off. Xaaladdan oo kale, waa in aad ku xidhi aad iPhone lacag USB iyo xerto warbaahinta derbi. Waxaa laga yaabaa in aad qaadato qiyaastii 15 daqiiqo si ay u qaadaan awood ku filan oo ay u celin ku saabsan. Haddii aad iPhone tago galaan xaalad ah dheecaan u qoto dheer, waxa laga yaabaa inay qaataan waqti dheer si ay u helaan tamar ku filan. Oo haddii aad isticmaasho cable USB si ay u xirmaan your computer, ka dibna waxa aad qaadan doonaa nus saac ah si ay u helaan awood guuleysatey.
# 2. Guuleysatey aad iPhone haddii iPhone oo kaliya si lama filaan ah shil
Haddii aad si lama filaan ah iPhone burburtay marka aad u isticmaalaya, ka dibna aad iPhone ma noqon ma on inta badan, sababtoo ah macruufka ku burburtay ama firmware si lama filaan ah u kharribmay. Xaaladdan oo kale, oo aad kaliya u baahan tahay in aad la bilaabi iPhone. Ku hay hoos u muhiim ah hurdada / Wake ku saabsan sare ee aad iPhone labaad dhawr ilaa logo Apple waxay ka muuqataa oo aad iPhone bilowdo.
Fiiro gaar ah: haddii habka kor ku yaal aanu u shaqeeyaan si ay uga bilowdo aad iPhone, hoos u hay hurdada / muhiimka ah Wake iyo button Home ah waqti isku mid ah ilaa logo Apple muuqan.
# 3. Force iPhone in Recovery Mode iyo ku celin
Haddii aad iPhone aan laga noqon doonaa oo ku xayiran Apple logo dhimashada, dibna tahay ahayd inaad qasbin iPhone galay Recovery Mode iyo ku celin. Ku hay hoos hurdada / button Wake iyo button Home for labaad yar ilaa aragto in Lugood iyo cable muuqdaan aad iPhone, weydiinaya in aad ku xirmaan Lugood. Markaas xiriiriyaan iPhone la your computer via cable USB ah. Burcad Lugood iyo ka dib Lugood ayaa kuu sheegi doona in ogaadaa iPhone ah. Oo halkaasaannu ka, kaliya aad u baahan tahay inaad riix batoonka soo celi, si loo soo celiyo aad iPhone. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka dib u soo celinta aad iPhone, dhammaan xogta ku saabsan iPhone laga tirtirayaa. Later, waxaa jiri doona doorasho si aad u soo celin aad iPhone la duug ah gurmad file. Kaliya dooro Lugood gurmad ugu danbeeyay in la soo celiyo aad iPhone.
# 4. Guuleysatey iPhone haddii aan laga noqon karaa laakiin xayiran Recovery Mode
Dadka qaar ayaa sheegay in markii ay cusboonaysiiso ay iPhone in macruufka 9, iPhone ma noqon kartaa caadi ahaan laakiin xayiran Recovery Mode. Xaaladdan oo kale, waxaan soo jeedinaynaa in aad isku daydo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) . Download oo ku xidh on your computer> xiriiriyaan iPhone la your computer> Daahfurka Dr.Fone ee macruufka iyo furmo suuqa ugu weyn, guji "Guuleysatey Device ah.
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka hadda!
Top 10 Apps in sida ugu fiican Photo collage on iPhone
> Resource > iPhone > iPhone noqon maayo On - Hel Solutions ka Now!